21 Imigomo Yokumaketha Yokugcizelela / Ukucasula Ozakwenu | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 17, 2011 NgoLwesithathu, uDisemba 12, 2012 Douglas Karr
Bengihleli ekhaya ngiqala ukufunda okuthile kusihlwa. Ngingumfana olula ngakho-ke noma nini lapho ngithola amagama athile amasha, ngivame ukuchofoza ku-Wikipedia ukuthola ukuthi yini engikufundayo. Nami ngiya phezulu lapho eminyakeni… ngakho-ke ngemuva kokuthi ngifunde ukuthi kuyini, ngikhipha amehlo ami bese ngibuyela ekufundeni.
Isizathu esenza ngihlahle amehlo ami ngukuthi ababhali (ikakhulukazi ababhali bezokumaketha) bahlala bezizwa bephoqelekile ukuthi basungule amagama amasha ukuze sifunde futhi sithathe indawo yamagama amadala, adinayo. Ngicabanga ukuthi kubenza bazizwe bahlakaniphile ngenkathi thina sihlehlela kokungafaneleki.
Nayi eminye yale migomo:
Imidiya ekhokhelwayo - Sasivame ukubiza lokhu ukukhangisa.
Imidiya etholakele - Sasivame ukubiza lokhu izwi-lomlomo.
Imidiya Ephethwe - Sasivame ukubiza lokhu ezimayelana Nomphakathi.
Traffic - Sasivame ukubiza lokhu ukusakaza or ukubukwa.
Ukumaketha - Sasivame ukubiza lokhu umvuzo, ukwethembeka, ibheji or izinhlelo zamaphoyinti. Amabheji eBoy Scout cishe ngo-1930, lokhu akuyona into entsha.
ukuzibophezela - Sasivame ukubiza lokhu ukufunda, ukulalela, noma ukubuka (futhi kamuva… amazwana)
Ukukhangisa Okuqukethwe - Sasivame ukubiza lokhu yekubhala.
Ukubizela esenzweni - lokhu besikade sikubiza ngokuthi yisikhangiso sesibhengezo. Ngenxa yokuthi ibisendaweni yethu uqobo, bekungasho ukuthi sidinga igama elisha.
ukusheshisa - besijwayele ukubiza lokhu Ukukhuthazwa.
Igrafu - (isb. Igrafu Yezenhlalo) besimane sichaze lokhu njengo ubudlelwano.
Isiphathimandla - sasivame ukubiza lokho ukuthandwa.
Lungiselela - besijwayele ukubiza lokhu ngcono.
Ukukhethwa - besijwayele ukubiza lokhu ukuhlela.
Amakhadi wamaphuzu - Besijwayele ukubiza lezi amadeshi.
Ama-Analytics - Besijwayele ukubiza lezi imibiko.
Kubuyekezwe: I-Personas - Besijwayele ukubiza lezi izingxenye ngokuya ngamaphrofayili wokuziphatha noma wokubalwa kwabantu abahlinzeki bedatha abathuthukise.
infographics - Besijwayele ukubiza lezi izithombe, ngesinye isikhathi imifanekiso yedatha, noma amaphosta. Singazilengisa ezipholile kuma-cubicles ethu (er .. izikhungo zokusebenza).
I-Verbiage - sasivame ukubiza labo amagama.
I-Whitepaper - sisanda kubiza labo amaphepha. Bangena ezimhlophe kuphela.
Isintu - besingajwayele ukubiza lokho nganoma yini .. besivamise ukuphendula ucingo noma umnyango uqobo.
Kungezwe: Ukumaketha Okuqukethwe - Sasivame ukubiza lokhu okuqukethwe okunamandla noma okuhlosiwe.
Kukhona amanye amagama amahle, futhi… i-hybrid, i-fusion, i-velocity, inkululeko yentando yeningi, isiteshi esiphambanweni, i-templatize, ukuhlanganiswa, ukuhlanganiswa, ukushesha…
Laba bafana badinga ukuhlehla ku-Google +, balale kancane, bese bayibeke phansi silulumagama sebanga lesi-8 esikukhumbula empeleni. Kungani kunesidingo sabantu ukushintsha njalo? Mhlawumbe ukuyibiza ngenye indlela entsha ukuthi ngandlela thile savela? (Angiyithengi, akunjalo?).
Ngicabanga ukuthi izinkampani eziningi zisalwela ukufaka uphawu olulula noma ukuphothula iziqu kuwebhusayithi ye-crappy, ungalokothi unake i Umkhankaso wemidiya osetshenzisiwe osetshenzisiwe osheshayo okhuliswa ngamandla ngokuzibandakanya komuntu.
Ngokwethembeka konke, ngicabanga ukuthi nami nginecala. Ngine- i-ejensi yezindaba entsha, hhayi inkampani yezentengiso. Kungaphezulu kwe- ejensi yezentengiso engenayo… Kodwa ngagembula ukuthi kuyohlale kukhona abezindaba ezintsha, kodwa ngaphakathi kungahle kuthathelwe indawo igama elisha eliyisiwula njengokuthi i-acute.
Uyazi, ngokungafani vuma.
Tags: ukusheshisaAma-AnalyticsIgunyashayela esenzweniUkukhangisa Okuqukethweukumaketha umongocurationimidiya etholakelelwekucocisanaukukhuliswaigrafuukwenziwa komuntuI-Marketing Infographicsnokwandisaimidiya ephethweimidiya ekhokhelwayoabantuamaphuzuTraffici-verbiageI-Whitepaper
Abaklami beWebhu baqhathanisa nabathuthukisi beWebhu
Aug 18, 2011 ku-4: 21 AM
Ngaphandle kokuthi bengicabanga ukuthi "ukumaketha okuqukethwe" "kuthengisa ukubhala." Noma ikakhulukazi "ukuthengisa izinto ezazivele zibhaliwe."
Ngiyakuzonda ukukuvuma, kepha ngisebenzise okungenani i-7 yalezi 1) ngaphandle kokucabanga ngakho noma okungu-2) ngobuso obuqonde ngokuphelele.
Aug 18, 2011 ngo-2: 02 PM
U-Erik - ngiyazisebenzisa nami! Ngeshwa, sidinga ukuhambisana namatemu akamuva futhi siwasebenzise. Noma-ke sibukeka sengathi asizange siguquke!
Aug 18, 2011 ku-9: 24 AM
Lesi sihloko singenze ngamamatheka, besisebenzisa amanye ala magama iminyaka kanti amanye awasebenzisanga nakancane… Ukuhlukaniswa kwamasheya nezingxenye zemakethe bekulokhu kuyisikhathi sokumaketha ngokuqinisekile .. ngokuqinisekile engikusebenzise iminyaka engama-20 edlule!
Aug 18, 2011 ngo-2: 07 PM
Ngiyakhumbula ngenkathi kusungulwa izinhlobo zokuziphatha futhi samane senza “imibuzo” futhi senza imikhankaso yangokwezifiso yaba yilezo 'zinhlobo'. Angikhumbuli ngikubiza ngokuhlukaniswa emuva ngaleso sikhathi - yize kungenzeka ukuthi kwakukhona! Kamuva sabe sesibabiza ngokuthi “ama-personas”… mhlawumbe lokho bekungaba ngcono ukukufaka ohlwini!
Aug 18, 2011 ngo-2: 15 PM
Ngiwuthandile umbono wakho kakhulu, ngiwabuyekeze Paula !!!
Aug 18, 2011 ngo-2: 54 PM
Ngiyabonga uDouglas, inhlawulo yami ohlwini olusha kufanele kube yiGunya elingena esikhundleni sokuDumeka, linikeza nje incazelo entsha yokujula kolwazi, okungenzeka noma kungenjalo, kepha kuzwakala kukuhle! 🙂
Aug 23, 2011 ngo-2: 48 PM
Ukuzingela umsebenzi kubhekwa njengomkhankaso wokumaketha, hhayi ukufaka isicelo somsebenzi. Angibonanga “uphawu lwangasese” olwalubizwa ngokuthi “iziqu” lapho kubhekiselwa kulowo ozoqokelwa umsebenzi. Wonke umuntu namuhla uno "brand" obekukade "kungubunikazi" bakhe noma "amakhono aphambili" noma "amandla aphezulu." O, enye "yimibhalo yokumaketha" phambilini ebibizwa ngokuthi yi-resume noma i-bio manje ebizwa nangokuthi "iphrofayili [eku-inthanethi]." “Umsebenzi” “uyithuba” futhi “inkinga” “yinselelo.” "Abasebenzi" baguquke baba "ngabasebenzi" abaguqukela ekubeni "ukutholwa kwamathalente." Kuqhubeka kanjalo… ..
Aug 24, 2011 ngo-3: 28 PM
Ucezu oluhle. Ngingathanda nje ukubona umuntu ekhahlela “amandla” ngaphandle kwesilulumagama!
Aug 24, 2011 ngo-5: 40 PM
Hawu ndoda! Ukusizakala kungenye yezintandokazi zami. 🙂
Aug 24, 2011 ngo-5: 09 PM
Kuyahlekisa futhi kuyiqiniso kakhulu ezimweni eziningi! Kepha ngicabanga ukuthi abathengisi bazama ukukhuluma ngolimi oluyaqondakala kumakhasimende abo kanye "nokukhangisa okujwayelekile komphakathi". Kufana nohlelo lwesimanje lokuhlanganisa izinzwa.
Aug 24, 2011 ngo-5: 41 PM
Ngiyethemba kanjalo Lana! Ngicabanga ukuthi kwesinye isikhathi sisebenzisa amanye ala magama futhi kuyesabisa kancane!
Sep 1, 2011 ngo-4: 40 PM
Bengihlangana ne-ejenti izolo onentshisekelo yokubloga nokumaketha online. Ungitshele ukuthi ngikhuluma njengabantu abasetha indawo yakhe yebhulogi. Iya kimi ngiyocabanga ngokuthi uthando lwami lwangempela lukuphi ukumaketha ……. Ngicabanga ukuthi ngemuva kokufunda imininingwane engaka ezihlokweni ezihlobene nokumaketha, umane uthathe amagama ungawanakile.
Nov 27, 2011 ngo-4: 47 PM
Futhi lapha bengicabanga ukuthi igama elithi "curation" liyigama elinezinhlamvu ezine. Ngima ngilungisiwe 😉
Usithokozele lesi sihloko.
Nov 29, 2011 ngo-10: 32 AM
I-athikili enhle futhi iyiqiniso kangako ngabantu abacabanga ngezinto 'ezidinga' ukuguquka. Kubukeka sengathi kungokwemvelo yabantu ukuhlobanisa izinto ezintsha nakho konke okusha nokwenziwe ngcono - ngokusobala lokhu kufaka phakathi ulwazimagama. Enye enhle efakwe kuhlu yindatshana evela emphakathini wezenhlalo yanamuhla kwaba "ukusebenzisana" manje okuthatha indawo “yokusebenzisana.” (http://socialmediatoday.com/node/397449&utm_source=feedburner_twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=autotweets)
Aug 25, 2012 ku-10: 28 AM
Umxhumanisi oyedwa we-blowhard ngiwela izindlela ngokuthanda ukusebenzisa igama elithi 'bifurcation' kuyo yonke imisho yesithathu. Ngeke nje uthi 'bese sibahlukanisa ngamaqembu amabili.' Ngicabanga ukuthi ungashaja ngaphezulu uma abantu bengakuqondi.
Ngangiphikisana 'nokubizelwa esenzweni.' Nginezincwadi zokubhala ezivela kuma-1920's ezinezahluko ezinikezelwe ekwakheni izingcingo eziphoqayo ezenzweni. Noma ngubani oyisebenzisa ngokufana 'nesikhangiso se-banner' akanaso isizinda esibi sokumaketha.